आज मिति २०७७, असोज २७ गते मंगलबार दिन ग्रहदशा अनुसार तपाईंको राशीफल हेर्नुहोस्।(भिडियो सहित) – Nepali news portal
आज मिति २०७७, असोज २७ गते मंगलबार दिन ग्रहदशा अनुसार तपाईंको राशीफल हेर्नुहोस्।(भिडियो सहित)
२७ आश्विन २०७७, मंगलवार ०७:३४ October 13, 2020 काठमाडौं डेष्क
मेष : तपाईंले आफ्नो शारीरिक शक्ति कायम राख्न खेलमा आफ्नो समय बिताउने सम्भावना छ। आफन्तहरूले तपाईंलाई अनपेक्षित उपहार ल्याउँछन् तर तपाईंबाट पनि केही मद्दतको आशा गर्नेछन्। तपाईं आज आफ्नो साथीको धुकधुकीसँग समन्वयन हुनुहुनेछ। हो, यो तपाईं प्रेममा हुनुहुन्छ भन्ने चिन्ह हो! नयाँ परियोजना र खर्चमा रूचि नलिनुहोस्। यो आफ्ना जोडीसित तपाईंको रमाइलो दिन हुनेछ।
वृष :पत्नीका मामिलाहरूमा आफ्नो नाक नबजाउनुहोस् किनकि यसले उनको रिस निम्त्याउन सक्छ। आफ्नो काम गरिरहनु ठीक हो। सकेसम्म कम हस्तक्षेप गर्नुहोस् अन्यथा यसले निर्भरताको सिर्जना गर्न सक्छ। कुनै मानिसहरू आफुले गर्न सक्ने भन्दा बढी प्रतिज्ञा गर्छन – कुरा मात्रै गर्ने र कुनै परिणाम नदिने मानिसहरूलाई बिर्सिनुहोस्। तपाईंले प्रत्येक कदममा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू गर्नुभयो भने – सफलता निश्चित तपाईंको हो। तपाईंले आफ्नी प्रियतमाको निष्कपटता माथि शङ्का गर्न सक्नुहुन्छ जसले आउँदा दिनहरूमा तपाईंको वैवाहिक जीवनको महिमा बर्बाद हुनेछ।
मिथुन :जीवनमा गम्भीर मनोवृत्ति नल्याउनुहोस्। टाढाका आफन्तले आज तपाईंसँग सम्पर्क गर्नेछन्। तपाईंले आज आफ्नी सपनाकी राजकुमारी भेटेकोले तपाईंका आँखा आनन्दले प्रकाशित भए र मुटुको धडकन पनि छिटो भयो। काममा निरन्तर परिवर्तनबाट तपाईंलाई लाभ हुनेछ। आज, तपाईंले आफ्नो विवाहको दिन गरेका सबै भाकल साँचा रहेछन भन्ने महसुस गर्नु हुनेछ। आफ्नो जोडी तपाईंको प्राण हो।
कर्कट :तपाईंलाई रोमाञ्चक र तनाउमुक्त राख्ने गतिविधिहरुसँग संलग्न हुनुहोस्। तपाईंलाई आज धेरै नयाँ वित्तीय योजनाहरु प्रस्तुत गरिनेछ – प्रतिबद्धता बनाउनु अघि फाइदा र हानिको राम्ररी वजन गर्नुहोस्। आफन्तहरूले तपाईंलाई अनपेक्षित उपहार ल्याउँछन् तर तपाईंबाट पनि केही मद्दतको आशा गर्नेछन्। प्रेम सम्बन्ध बारे चर्को हल्लाखल्ला नगर्नुहोस्। तपाईंलाई बिहान बिजुलीको कटौति वा अरू केही कारणले तयार हुन बिलम्ब गर्नेछ, तर तपाईंको जोडी आएर उद्धार गर्नेछन्।
सिंह : तपाईंलाई रोमाञ्चक र तनाउमुक्त राख्ने गतिविधिहरुसँग संलग्न हुनुहोस्। तपाईंलाई आज धेरै नयाँ वित्तीय योजनाहरु प्रस्तुत गरिनेछ – प्रतिबद्धता बनाउनु अघि फाइदा र हानिको राम्ररी वजन गर्नुहोस्। आफन्तहरूले तपाईंलाई अनपेक्षित उपहार ल्याउँछन् तर तपाईंबाट पनि केही मद्दतको आशा गर्नेछन्। प्रेम सम्बन्ध बारे चर्को हल्लाखल्ला नगर्नुहोस्। तपाईंलाई बिहान बिजुलीको कटौति वा अरू केही कारणले तयार हुन बिलम्ब गर्नेछ, तर तपाईंको जोडी आएर उद्धार गर्नेछन्।
कन्या : अत्यधिक प्रभावशाली मान्छेको सहायताले तपाईंको नैतिकतामा ठूलो बढावा दिन्छ। केही महत्त्वपूर्ण कामहरूमा नराम्रो वित्तीय स्थितिको कारण रोक लाग्नेछ। तपाईंको जोडी मद्दतगार र सहयोगी हुनेछ। तपाईंको व्यापारिक भावना र बातचीत गर्ने क्षमताले फाइदा दिनेछ। असीम रचनात्मकता र उत्साहले तपाईंको अर्को फाइदाजनक दिन आउँछ। तपाईंलाई आज आनन्दित वैवाहिक जीवनको महसुस कसरी गरिन्छ भन्ने महसुस हुनेछ।
तुला :रक्तचाप विरामीहरुले खासगरी आफ्नो स्वास्थ्यको अतिरिक्त ध्यान राख्नुपर्छ। तपाईं आज आफ्नो पैसालाई लिएर समस्यामा पर्नुहुनेछ – तपाईंले बढी खर्च गर्नुहुन्छ वा आफ्नो वालेट गलत ठाउँमा राख्नु हुनेछ – बेवास्ताले गर्दा केही घाटा निश्चित छ। साँझ तिर अचानक आएको सुसमाचारले सम्पूर्ण परिवारमा आनन्द र खुशी ल्याउँछ। लामो समय पछि आफ्नो मित्रसँग भेट हुने सोचेर गुल्टिंदै गरेको ढुँगा झैं तपाईंको मनको ढुकढुकी बढ्न सक्छ। आज तपाईंको कार्यस्थल प्रेममय हुनेछ। आज तपाईंले चाहेका कुराहरू नहुने दिन हो। तपाईंको वैवाहिक जीवन राम्रो बनाउने प्रयासले आज आशा गरेकोभन्दा राम्रो फल दिनेछ।
वृश्चिक : एउटा लाभदायी दिन हो र तपाईं दीर्घ रोगबाट राहत पाउन सक्षम हुन सक्नुहुनेछ। तपाईंले आफ्नो समस्या बिर्सिनुहुनेछ र परिवारका सदस्यहरुसँग राम्रो समय बिताउनु हुनेछ। आज तपाईंको प्रियलाई तपाईंको असह्य व्यवहारसँग सामना गर्न अत्यन्तै गाह्रो पर्नेछ। तपाईंले कुनै पनि नयाँ परियोजना लिनु अघि दुई पटक सोच्नुहोस्। केही विशेष आश्चर्य गरेर तपाईंको जीवनसाथीले तपाईंलाई नराम्रो मुडबाट छुटकारा दिलाउनेछ।
धनु : घरमा काम गर्दा विशेष ध्यान गर्नुहोस्। कुनै पनि घरेलू सामानहरूको लापरवाह प्रयोगले तपाईंलाई समस्या पैदा गर्न सक्छ। ब्याङ्कका कामहरूमा धेरै ध्यान दिनु आवश्यक छ। आफन्तको घरमा जानु तपाईंले कल्पना गरेभन्दा पनि धेरै राम्रो हुनेछ। अचानक भएको रोमान्टिक तर्कले तपाईंलाई भ्रममा पार्न सक्नेछ। तपाईंले चिनेका महिलाहरुको मार्फत कामको लागि अवसर आउनेछ। आफ्नो जीवनसाथीले आज तपाईंलाई अतिरिक्त विशेष समय दिनेछन्।
मकर : बच्चाहरुले तपाईंको साँझ रमाइलो पार्नेछन्। नीरस र व्यस्त दिनलाई बिदा गर्न एउटा राम्रो खाने योजना गर्नुहोस्। उनीहरूको भेलाले तपाईंको शरीरलाई पुन ऊर्जा दिनेछ। दिनको पछिल्लो भागमा वित्तीय सुधार हुनेछ। विदेशी आफन्तले पठाएको उपहारले तपाईंलाई खुसी बनाउनेछ। व्यक्तिगत सम्बन्ध संवेदनशील र कमजोर छन्। आफ्नो दृष्टिकोणमा इमानदार र सही हुनुहोस् – तपाईंको सङ्कल्प र कौशलले परिचय प्राप्त गर्नेछ। एउटा लाभदायी दिन किनकि केही कुराहरू तपाईंको पक्षमा जाने देखिन्छ र तपाईं संसारको शीर्षमा हुनुहुनेछ। आज तपाईं आफ्नो जोडीसित आफ्नै तनाउको कारण झगडा गर्न सक्नुहुन्छ र वास्तवमा कुनै कारण हुँदैन।
कुम्भ :तपाईंको व्यक्तित्वले आज अत्तरको झैं काम गर्नेछ। कसैका लागि – परिवारमा नयाँ सदस्यको आगमनले उत्सव र पार्टी ल्याउँछ। तपाईं विपरीत लिंगीहरूको लोकप्रिय र सजिलै आकर्षित सदस्य हुनुहुनेछ। तपाईंलाई आफ्नो रचनात्मकता हराएको छ भन्ने महसुस हुनेछ र तपाईंलाई निर्णय गर्न अत्यन्तै कठिन हुनेछ। वैवाहिक जीवनको एउटा कठिन चरण पछि, तपाईंले आज रमाइलो दिन पाउनु हुनेछ।
मीन : तपाईंको हत्पते प्रकृतिले तपाईंलाई गम्भीर स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। तपाईं एउटा रोमाञ्चक नयाँ परिस्थितिमा आफूलाई भेट्टाउन सक्नुहुन्छ – जसले तपाईंलाई वित्तीय लाभ हुनेछ। तपाईंले प्रेम गर्नेहरूलाई उपहार दिने र उनीहरूबाट प्राप्त गर्ने शुभ दिन। चिन्ता नगर्नुहोस्, आज तपाईँको शोक बरफ जस्तै पग्लिन्छ। तपाईंले लामो समयदेखि काम गरिरहेको एउटा महत्त्वपूर्ण परियोजनामा ढिलाइ भएको छ। व्यक्तिगत दूरी वैवाहिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर आज तपाईंहरू एक-अर्कामा नजिक हुने प्रयास गर्नुहोस्। रोमान्स चरममा छ!
सबै सरकारी अस्पताल कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णय